ရဲမေ (၁)ဦး ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ် မန္တလေးမြို့ရဲ့ ည တစ်ည…အကြောင်း – Zartiman
တာဝန်နဲ့ထွက်လာ တာမဟုတ်တဲ့ အတွက် ပြသာ နာဖြစ်ရင်တောင် ဟိုကောင်တွေက မှောက်ကုန်ပါပြီတဲ့. . .ကိုယ်လည်း မပြီးသေးဘူး . . .ကိုယ်ကအရေးထပ်ယူခံရဦးမယ်. . .ဘာမှစဉ်းစား မနေနဲ့. . ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိတဲ့ဥပဒေ ဒီနိုင်ငံမှာ ရှိနေတယ်..”ရဲစည်း ကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ”ေ တွးလည်းတွေး စိုးလည်းစိုးရိမ်နဲ့ . လူမပြတ်မီးမပြတ်တဲ့လမ်းပဲပတ်မောင်းနေမိတာ . . ဆီကတော့ ဖြည့်ပြီးသားမို့ ၃၀၀၀ဖိုး က ကမ္ဘာပတ် ..ရသေးတယ်..မီးပွိုင့်ကျ..ဘေးကယှဉ်စီးတဲ့ သူတောင်းစားက..မျက်စိမှိတ်ပြတယ်. . . ကြည့်မိတာ ကိုက ငါ့အမှား.စိတ်ထဲ ကနေ ကျိတ်ဆဲမိတယ် ”သဒေါင်းစားကြီး”ဘုရားကြီး မီးပွိုင့်ကနေ ညာကွေ့ပန်း ခင်းလမ်းထိပ်…ရှေ့ဆို ညာချိုးရင် ရဲတိုင်း ရုံးထဲရောက်ပြီ။
ဒါပေမယ့် မရောက်ခင် မီတာ ၇၀၀ ၁၀၀၀ ခန့်က မီးပြတ်လူပြတ် လမ်းကြီး ကွေ့မဝင်ရဲဘူး.မလိုလားအပ်တဲ့ပြသာနာတွေ .ဖြစ်သွားနိုင်တ ယ်ကိုယ့်ရုံးရှိရာ မကွေ့ဘူး . . ဆက်မောင်းလာတယ် . . ညကြီး မိုးချူပ် အဆော င်က ဂျူနီယာ ညီမလေး ခွင့်ပြန်လို့ ကယ်ရီနဲ့ သွားရလာ ရတာ စိတ်မချလို့ ကိုယ်တိုင်သွားကြိုသွားပို့ လုပ်ပေးတယ် . . အပြန် တစ်ယောက်တည်း အုပ်စုဖွဲ့ လိုက်ခံရတယ်။လက် ထဲကဖုန်း နာရီ ကြည့်မိတော့ ၁၀နာရီ ၅မိနစ် ကိုယ့်နောက် လိုက်လာကြတာလား သူတို့ခရီး သူတို့ရှေ့ဆက်ကြ တာလား..? သေချာအော င် ကိုယ့်ဆိုင် ကယ်ကို အရင်အရှိန်တင်တယ် ။ဒီကောင်တွေ လိုက်ကပ်တယ်ပြန်ပြီး အရှိန်လျော့ပစ်တယ် . .ကျော် သွားပြီး ကိုယ့်ဘြေး ပန်ကပ်ကြတယ်။
ဘောဂသီရိကနေ.နှင်းဆီဝိုင်း အကျော်၊ လူသူကလည်းပြတ် ကားလေးကတစ်စီးစ နှစ်စီးစ..ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပတ်ပြေးရေ အာင်လည်း ဒင်းတို့ က စူပါဖိုး ၂စီး ၁စီးက မခေါ်တတ်ဘူး. ဆိုင်ကယ် ယှဉ်စီးတောင် ကိုယ့်စကေး အ့လောက် မညံ့ဘူး . .ငယ်ငယ်ကတည်းက ရွာလမ်း လယ် ကွင်း ဘောင်ပြားေ လးကို လေဗာကုန် သုတ်ခဲ့တာ ကိုခက်တာက… အ့ဒီစူပါဖိုးတွေကို ကိုယ့် 110 လေးက မပြေးပါနဲ့ မလွတ်ဘူးဆိူတာ ပြောနေသေ ယာင်ယောင် ကွကိုယ် ” ရဲ “မကလို့ နီနေနေ. . .အကြမ်းဖက် ဆင်းမကလို့ အနုဖက်ဆ င်းနေနေ…ဆိုင်ကယ်၃စီး လူ၆ယောက် ကို မှောက် သွားအောင် ဖိုက်ရအောင် ကိုယ်က ရုပ်ရှင်ထဲက ဂျက်မမှ မဟုတ်တာ ဖြစ်ပြီဟေ့ ဆိုရင်လည်း..သူသေ ကိုယ်ကြေ ချဖို့ ။
သတိကလည်း..ကပ်နေရသေးတ ယ်အနိုင်အရှူံးက လေ့ကျ င့်ရေးထဲက ကြိုးဝိုင်းမှာလို ဒ ဏ်ရာရဖူးယောင်နဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး. . . ရှူံးရင် အချိန်ကာ လနဲ့ နေရာဒေသ အရ လူသတ်လုယက်မုဒိန်းမှုတော့ ဖြစ်မှာပဲ. . .ဖြစ်သွားရ င်လည်း ငါလည်း ဘဝတုံး . . ရဲမေဟ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟ နဲ့ ငါ့ကြောင့် ငါ့တပ်ဖွဲ့လည်း သိက္ခာကျရဦးမယ်။ဒီကောင်တွေကို ငါဘယ်လိုထားခဲ့ရမလဲ? . သူတို့ဘက်က စ လာရင် ငါ ဘယ်လိုကာကွယ် ရမလဲ? . ငါ ဘယ်လိုတွေ ပြင်ဆင်သင့်လဲ? ငါ ဘယ်လိုချမလဲ? . . ကိုယ်ခံပ ညာတွေ မှတ်မိသ လောက် လည်း စဉ်းစားတယ်.. တွေးနေတာ လည်း..ရင် တဒိန်းဒိန်းနဲ့ ဘုရားစာလည်း ရွတ်နေတာပဲ. . .သံဗုဒ္ဓေ ရော ဂုဏ်တော် ကိုးပါးရော . . .သရဏဂုံလည်းရွတ် . .။
ရသမျှဂါထာ အကုန်ရွတ် ဆို ရုပ်ပေါက်တွေကလည်း..မာဖီးယားဂိုဏ်းက ဘယ်လက်ရုံးညာလက်ရုံးဆိုဒ်နဲ့ . . .။ဆေးမှင်ကြောင်တွေရောပဲ ကားတစ်စီး လာတော့..ကိုယ်က . .အ့ကားနား ကပ်လိုက် မီးပွိုင့်မိတော့..သကောင့်သားေ တွနဲ့ ယှဉ်ရပ် မိပြန်ပြီ.. ဒီတစ်ခါ.. ဒင်းတို့ကို .မကြည့်ဘူး . . .ခပ်တည်တည်ပဲ… အဲ့မှာ.လက်က . . .ဖုန်းပါဝါခလုတ်နှိပ်မိတော့ အဟီး ကိုယ့်အခွ က်ကြီးပေါ်လာတ ယ်။ ယူနီဖော င်းကြီး နဲ့.. အ့မှာ. တစ်ကောင်က ဒါကို မျက်လုံးရောက်တော့ . .ကိုယ်က စပြီ။ခပ်တည်တည်ပဲ ဖုန်းတွေေ ကာက်ခေါ် ”ဟယ် လို ဗိုလ် ကြီး.ပေါ်တာ ဆွဲဖို့က လူဘယ် နှစ်ယောက်လဲ ၃၀ ဟုတ်လား ဗိုလ်ကြီး..အခု ဒီထောင့်က ကင်းပုန်းထွက် လာလိုက်တော့.။
ပန်းခင်းလမ်းမှာ ၂ယောက်တွေ့တယ် . .ဆွဲလို့ရပြီ..ပီးရင် မြင်းရုပ်ဘေးနားမှာ မှောင်ရိပ်ခိုနေတာ ၁ယောက်..အ့နားက ကင်းပုန်းလည်း ထွက် ဆွဲလိုက် တော့ ဗိုလ်ကြီး..ကျွန်တော် ပတ်လိုက်ဦးမယ်. . . ဟုတ် ဗိုလ်ကြီး..ကျန်တဲ့ ကင်းပုန်းတွေ လည်း ဆွဲဖို့ထုတ်ဖို့ ထပ်ပြောမယ် ဗိုလ်ကြီး..ဟုတ်ဗိုလ်ကြီး လေးစား..” မီးမစိမ်းခင် ရှေ့ကကား လည်းရှိတုန်း လိုရင်းကို မြန်မြန်ပြောရသေး . . မဟုတ်..ဖုန်းတောင် လုသွား နိုင်တယ်.. ”ဟာ အမက ရဲမေလား..” စလာပါပြီ..မာဖီယားဂိုဏ်းစ တားရုပ်နဲ့ကောင်က မီးကလည်းမ စိမ်းသေးဘူး။” ဟုတ်တယ်..ပေါ်တာ ဆွဲဖို့ လူလိုက်စုနေတာ ခင်ဗျားတို့ဝင်မလား..လစာ၂သိန်းနီး ပါးရတယ် ထောက်ပံ့ကြေးေ တွရော .ရတယ်..။
စားရိ တ်ငြိမ်းခေါ်ပါ့မယ်ဗျာ ရဲထဲဝင်ပါ့လား.ကျွန်တော်တောင် ရဲမေလုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်ဗျ . . .အခုဒီနားမှာ ကင်းပုန်း ချထားတဲ့ ကျွန်တော့်တပ်စိ တ်ရှိတယ် စိတ်ဝင်စားရင် အကိုတို့ တစ်ခါတည်းလိုက်ခဲ့လို့ရတယ်”ခပ်တည်တည်ပဲ ဖောရတာပေါ့..မီးလည်းအစိမ်း ”မလုပ်ချင်ပါဘူး..အမရာ . . အ့မို့ မရီးကို မြင်ဖူးလို့ ကြည့်နေတာ . .လတ်စသတ်တော့ မကြီးက ရဲမေကိုး . .ကျွန်တော့်ဦးေ လးလည်း ရဲပဲ မကြီး အ့တိုင်းရုံး ထဲမှာပဲနေတာ. .ရဲအုပ်အေးေ မာင် လေ မကြီးသိလား”မကြားဖူးတာတော့အမှန်ပါ ”ရလား..မကြီး သားတို့ လိုက်ပို့ ပေးရမလား . . ပေါ်တာက ဘယ်လိုနေ့တွေဆွဲတာလဲ မကြီး . .ဘယ်နေရာတွေ ကင်းပု န်းချတာလဲ…။
ဟီး” ရူးကြောင်မူးကြောင်တွေနဲ့..စိတ်ေ လတယ်။ ”ခဏလေး..ငါ့ဗိုလ်ကြီးဆီ ငါဖုန်းဆက် လိုက်ဦးမယ်။ ပန်းခင်း လမ်းထောင့်က ၂ ယောက်ရလား ဆိုတာ””ဟုတ်..ဟုတ်..မကြီး..သား တို့ကို ခွင့်ပြုဦးနော်.. သွားရအောင်ေ ဟျာင့်ဒေ..မကြီး နောက်တွေ့ရင် သားတို့ကိုနုတ် ဆက်နော်..”ဟူး………ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဆိုင် ကယ်မီး ခိုးတွေနော က်မှ ပြေးထွက်သွားတဲ့ ဆိုင်ကယ်၃စီးနဲ့ မာဖီးယား ဂိုဏ်းသားတွေ မျက်စိရှေ့ က ပျောက်သွားမှပဲ . .ရင်ထဲက အလုံးကြီးကျသွား ပါေ ရာတ ယ်။အဲ့ ကနေ..အဆောင်ကို လီဗာ ကုန် သုတ်လာတာ . .နောက်တစ်ခါ ဒီ ကောင်တွေ ပြန်ကပ်မှာကြောက်လို့လေ . .နောက်က မီးမြင်ရင် ကို..ဟာ လမ်းသွားလမ်းလာ အဖော်ရ တယ်ဟဆိုပြီး.ဝမ်းမသာပဲ . . ။
ဒီကောင်တွေ ထင်ပြီး အသကုန်သုတ်တော့ တာပဲ . . .ဖုန်းလေး ဖွင့်လို့ ပေါ်လာတဲ့ပုံမြင်တိုင်း ”ရုပ်ဆိုးကြီး ကို တင် ထားတယ်” ”ဆိုးလိုက် တဲ့ အခွက်ကြီး” .”ဂျစ်တိဂျစ်ကန်ရုပ်နဲ့” စတဲ့. ကောင်းချီးအဖြာဖြာနဲ့ . .ထောပနာ အပြုခံရတဲ့ ကိုယ့်အခွက်ကြီးက ဒီတစ်ခါတော့ ကိုယ့်ဘ ဝကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တ ယ်။ပြသာနာလည်းမဖြစ် . . . လူလည်းဘေး ဒုက္ခမရောက်ရဘဲ အဆော င်ကို ချောချောမွေ့မွေ့ပြ န်ရောက် ခဲ့တယ်။
ရဲမေ (၁)ဦး ကိုယျတိုငျ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ ခွောကျခွားဖှယျ မန်တလေးမွို့ရဲ့ ည တဈည…အကွောငျး
တာဝနျနဲ့ထှကျလာ တာမဟုတျတဲ့ အတှကျ ပွသာ နာဖွဈရငျတောငျ ဟိုကောငျတှကေ မှောကျကုနျပါပွီတဲ့. . .ကိုယျလညျး မပွီးသေးဘူး . . .ကိုယျကအရေးထပျယူခံရဦးမယျ. . .ဘာမှစဉျးစား မနနေဲ့. . ဘယျနိုငျငံမှာမှမရှိတဲ့ဥပဒေ ဒီနိုငျငံမှာ ရှိနတေယျ..”ရဲစညျး ကမျးထိနျးသိမျးရေး ဥပဒေ”ေ တှးလညျးတှေး စိုးလညျးစိုးရိမျနဲ့ . လူမပွတျမီးမပွတျတဲ့လမျးပဲပတျမောငျးနမေိတာ . . ဆီကတော့ ဖွညျ့ပွီးသားမို့ ၃၀၀၀ဖိုး က ကမ်ဘာပတျ ..ရသေးတယျ..မီးပှိုငျ့ကြ..ဘေးကယှဉျစီးတဲ့ သူတောငျးစားက..မကျြစိမှိတျပွတယျ. . . ကွညျ့မိတာ ကိုက ငါ့အမှား.စိတျထဲ ကနေ ကြိတျဆဲမိတယျ ”သဒေါငျးစားကွီး”ဘုရားကွီး မီးပှိုငျ့ကနေ ညာကှပေ့နျး ခငျးလမျးထိပျ…ရှဆေို့ ညာခြိုးရငျ ရဲတိုငျး ရုံးထဲရောကျပွီ။
ဒါပမေယျ့ မရောကျခငျ မီတာ ၇၀၀ ၁၀၀၀ ခနျ့က မီးပွတျလူပွတျ လမျးကွီး ကှမေ့ဝငျရဲဘူး.မလိုလားအပျတဲ့ပွသာနာတှေ .ဖွဈသှားနိုငျတ ယျကိုယျ့ရုံးရှိရာ မကှဘေူ့း . . ဆကျမောငျးလာတယျ . . ညကွီး မိုးခြူပျ အဆော ငျက ဂြူနီယာ ညီမလေး ခှငျ့ပွနျလို့ ကယျရီနဲ့ သှားရလာ ရတာ စိတျမခလြို့ ကိုယျတိုငျသှားကွိုသှားပို့ လုပျပေးတယျ . . အပွနျ တဈယောကျတညျး အုပျစုဖှဲ့ လိုကျခံရတယျ။လကျ ထဲကဖုနျး နာရီ ကွညျ့မိတော့ ၁၀နာရီ ၅မိနဈ ကိုယျ့နောကျ လိုကျလာကွတာလား သူတို့ခရီး သူတို့ရှဆေ့ကျကွ တာလား..? သခြောအော ငျ ကိုယျ့ဆိုငျ ကယျကို အရငျအရှိနျတငျတယျ ။ဒီကောငျတှေ လိုကျကပျတယျပွနျပွီး အရှိနျလြော့ပဈတယျ . .ကြျော သှားပွီး ကိုယျ့ဘွေး ပနျကပျကွတယျ။
ဘောဂသီရိကနေ.နှငျးဆီဝိုငျး အကြျော၊ လူသူကလညျးပွတျ ကားလေးကတဈစီးစ နှဈစီးစ..ဆိုငျကယျနဲ့ ပတျပွေးရေ အာငျလညျး ဒငျးတို့ က စူပါဖိုး ၂စီး ၁စီးက မချေါတတျဘူး. ဆိုငျကယျ ယှဉျစီးတောငျ ကိုယျ့စကေး အ့လောကျ မညံ့ဘူး . .ငယျငယျကတညျးက ရှာလမျး လယျ ကှငျး ဘောငျပွားေ လးကို လဗောကုနျ သုတျခဲ့တာ ကိုခကျတာက… အ့ဒီစူပါဖိုးတှကေို ကိုယျ့ 110 လေးက မပွေးပါနဲ့ မလှတျဘူးဆိူတာ ပွောနသေေ ယာငျယောငျ ကှကိုယျ ” ရဲ “မကလို့ နီနနေေ. . .အကွမျးဖကျ ဆငျးမကလို့ အနုဖကျဆ ငျးနနေေ…ဆိုငျကယျ၃စီး လူ၆ယောကျ ကို မှောကျ သှားအောငျ ဖိုကျရအောငျ ကိုယျက ရုပျရှငျထဲက ဂကျြမမှ မဟုတျတာ ဖွဈပွီဟေ့ ဆိုရငျလညျး..သူသေ ကိုယျကွေ ခဖြို့ ။
သတိကလညျး..ကပျနရေသေးတ ယျအနိုငျအရှူံးက လကြေ့ ငျ့ရေးထဲက ကွိုးဝိုငျးမှာလို ဒ ဏျရာရဖူးယောငျနဲ့ မပွီးနိုငျဘူး. . . ရှူံးရငျ အခြိနျကာ လနဲ့ နရောဒသေ အရ လူသတျလုယကျမုဒိနျးမှုတော့ ဖွဈမှာပဲ. . .ဖွဈသှားရ ငျလညျး ငါလညျး ဘဝတုံး . . ရဲမဟေ ရဲတပျဖှဲ့ဟ နဲ့ ငါ့ကွောငျ့ ငါ့တပျဖှဲ့လညျး သိက်ခာကရြဦးမယျ။ဒီကောငျတှကေို ငါဘယျလိုထားခဲ့ရမလဲ? . သူတို့ဘကျက စ လာရငျ ငါ ဘယျလိုကာကှယျ ရမလဲ? . ငါ ဘယျလိုတှေ ပွငျဆငျသငျ့လဲ? ငါ ဘယျလိုခမြလဲ? . . ကိုယျခံပ ညာတှေ မှတျမိသ လောကျ လညျး စဉျးစားတယျ.. တှေးနတော လညျး..ရငျ တဒိနျးဒိနျးနဲ့ ဘုရားစာလညျး ရှတျနတောပဲ. . .သံဗုဒ်ဓေ ရော ဂုဏျတျော ကိုးပါးရော . . .သရဏဂုံလညျးရှတျ . .။
ရသမြှဂါထာ အကုနျရှတျ ဆို ရုပျပေါကျတှကေလညျး..မာဖီးယားဂိုဏျးက ဘယျလကျရုံးညာလကျရုံးဆိုဒျနဲ့ . . .။ဆေးမှငျကွောငျတှရေောပဲ ကားတဈစီး လာတော့..ကိုယျက . .အ့ကားနား ကပျလိုကျ မီးပှိုငျ့မိတော့..သကောငျ့သားေ တှနဲ့ ယှဉျရပျ မိပွနျပွီ.. ဒီတဈခါ.. ဒငျးတို့ကို .မကွညျ့ဘူး . . .ခပျတညျတညျပဲ… အဲ့မှာ.လကျက . . .ဖုနျးပါဝါခလုတျနှိပျမိတော့ အဟီး ကိုယျ့အခှ ကျကွီးပျေါလာတ ယျ။ ယူနီဖော ငျးကွီး နဲ့.. အ့မှာ. တဈကောငျက ဒါကို မကျြလုံးရောကျတော့ . .ကိုယျက စပွီ။ခပျတညျတညျပဲ ဖုနျးတှေေ ကာကျချေါ ”ဟယျ လို ဗိုလျ ကွီး.ပျေါတာ ဆှဲဖို့က လူဘယျ နှဈယောကျလဲ ၃၀ ဟုတျလား ဗိုလျကွီး..အခု ဒီထောငျ့က ကငျးပုနျးထှကျ လာလိုကျတော့.။
ပနျးခငျးလမျးမှာ ၂ယောကျတှတေ့ယျ . .ဆှဲလို့ရပွီ..ပီးရငျ မွငျးရုပျဘေးနားမှာ မှောငျရိပျခိုနတော ၁ယောကျ..အ့နားက ကငျးပုနျးလညျး ထှကျ ဆှဲလိုကျ တော့ ဗိုလျကွီး..ကြှနျတျော ပတျလိုကျဦးမယျ. . . ဟုတျ ဗိုလျကွီး..ကနျြတဲ့ ကငျးပုနျးတှေ လညျး ဆှဲဖို့ထုတျဖို့ ထပျပွောမယျ ဗိုလျကွီး..ဟုတျဗိုလျကွီး လေးစား..” မီးမစိမျးခငျ ရှကေ့ကား လညျးရှိတုနျး လိုရငျးကို မွနျမွနျပွောရသေး . . မဟုတျ..ဖုနျးတောငျ လုသှား နိုငျတယျ.. ”ဟာ အမက ရဲမလေား..” စလာပါပွီ..မာဖီယားဂိုဏျးစ တားရုပျနဲ့ကောငျက မီးကလညျးမ စိမျးသေးဘူး။” ဟုတျတယျ..ပျေါတာ ဆှဲဖို့ လူလိုကျစုနတော ခငျဗြားတို့ဝငျမလား..လစာ၂သိနျးနီး ပါးရတယျ ထောကျပံ့ကွေးေ တှရော .ရတယျ..။
စားရိ တျငွိမျးချေါပါ့မယျဗြာ ရဲထဲဝငျပါ့လား.ကြှနျတျောတောငျ ရဲမလေုပျရတာ အဆငျပွတေယျဗြ . . .အခုဒီနားမှာ ကငျးပုနျး ခထြားတဲ့ ကြှနျတေျာ့တပျစိ တျရှိတယျ စိတျဝငျစားရငျ အကိုတို့ တဈခါတညျးလိုကျခဲ့လို့ရတယျ”ခပျတညျတညျပဲ ဖောရတာပေါ့..မီးလညျးအစိမျး ”မလုပျခငျြပါဘူး..အမရာ . . အ့မို့ မရီးကို မွငျဖူးလို့ ကွညျ့နတော . .လတျစသတျတော့ မကွီးက ရဲမကေိုး . .ကြှနျတေျာ့ဦးေ လးလညျး ရဲပဲ မကွီး အ့တိုငျးရုံး ထဲမှာပဲနတော. .ရဲအုပျအေးေ မာငျ လေ မကွီးသိလား”မကွားဖူးတာတော့အမှနျပါ ”ရလား..မကွီး သားတို့ လိုကျပို့ ပေးရမလား . . ပျေါတာက ဘယျလိုနတှေ့ဆှေဲတာလဲ မကွီး . .ဘယျနရောတှေ ကငျးပု နျးခတြာလဲ…။
ဟီး” ရူးကွောငျမူးကွောငျတှနေဲ့..စိတျေ လတယျ။ ”ခဏလေး..ငါ့ဗိုလျကွီးဆီ ငါဖုနျးဆကျ လိုကျဦးမယျ။ ပနျးခငျး လမျးထောငျ့က ၂ ယောကျရလား ဆိုတာ””ဟုတျ..ဟုတျ..မကွီး..သား တို့ကို ခှငျ့ပွုဦးနျော.. သှားရအောငျေ ဟြာငျ့ဒေ..မကွီး နောကျတှရေ့ငျ သားတို့ကိုနုတျ ဆကျနျော..”ဟူး………ကနျြနခေဲ့တဲ့ ဆိုငျ ကယျမီး ခိုးတှနေော ကျမှ ပွေးထှကျသှားတဲ့ ဆိုငျကယျ၃စီးနဲ့ မာဖီးယား ဂိုဏျးသားတှေ မကျြစိရှေ့ က ပြောကျသှားမှပဲ . .ရငျထဲက အလုံးကွီးကသြှား ပါေ ရာတ ယျ။အဲ့ ကနေ..အဆောငျကို လီဗာ ကုနျ သုတျလာတာ . .နောကျတဈခါ ဒီ ကောငျတှေ ပွနျကပျမှာကွောကျလို့လေ . .နောကျက မီးမွငျရငျ ကို..ဟာ လမျးသှားလမျးလာ အဖျောရ တယျဟဆိုပွီး.ဝမျးမသာပဲ . . ။
ဒီကောငျတှေ ထငျပွီး အသကုနျသုတျတော့ တာပဲ . . .ဖုနျးလေး ဖှငျ့လို့ ပျေါလာတဲ့ပုံမွငျတိုငျး ”ရုပျဆိုးကွီး ကို တငျ ထားတယျ” ”ဆိုးလိုကျ တဲ့ အခှကျကွီး” .”ဂဈြတိဂဈြကနျရုပျနဲ့” စတဲ့. ကောငျးခြီးအဖွာဖွာနဲ့ . .ထောပနာ အပွုခံရတဲ့ ကိုယျ့အခှကျကွီးက ဒီတဈခါတော့ ကိုယျ့ဘ ဝကို ကယျတငျနိုငျခဲ့တ ယျ။ပွသာနာလညျးမဖွဈ . . . လူလညျးဘေး ဒုက်ခမရောကျရဘဲ အဆော ငျကို ခြောခြောမှမှေ့ပွေ့ နျရောကျ ခဲ့တယျ။